आजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल फाल्गुन २ गते आईतबार इश्वी सन २०२१ फेब्रुवरी १४ तारीख – Ap Nepal
आजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल फाल्गुन २ गते आईतबार इश्वी सन २०२१ फेब्रुवरी १४ तारीख
मेष राशि : चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ -प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा समय उत्तम रहेकोछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । नयाँ कार्य थालनिको योग रहेकोछ । मध्यान्न पश्चात सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार रहनेछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ ।
बृष राशि : इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । मनोरञ्जन मुलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । सामान्य कार्यमा धेरै समय र श्रम खर्चनु पर्ला । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ सजग रहनु होला ।
मीथुन राशि : का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दामा अबल रहीनेछ । तपाईको मिहिनेतबाट अरुहरुले फाईदा लिन सक्नेछन । कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाईको सामना हुन सक्छ ।
कर्कट राशि : हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो – भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । सामान्य कार्यमा धेरै समय र श्रम खर्चनु पर्ला । पारीवारको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ ।
सिंह राशि : मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे – मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । तपाईको मिहिनेतबाट अरुहरुले फाईदा लिन सक्नेछन । कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाईको सामना हुन सक्छ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच सम्बन्ध सुधार रहनेछ । आफन्त जन बिच भेटघाट हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ ।
कन्या राशि : टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो – मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्नेछ । वाणीका कारण सामान्य वादविवाद आईपर्न सक्नेछ । नजिकका साथी भाईहरु सगँ सामान्य मनमुटाब हुन सक्नेछ । शारिरीक अस्वस्थाको सामना गर्नु पर्ला । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ ।
तुला राशि : र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते – मान्यजनको साथसहयोगको कमी महसुस गरीनेछ । शारिरीस्क आलस्यताले सताउन सक्नेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगका निम्ती सामान्य खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ साथै जिबन साथीको सहयोमा कार्य सम्पादनमा मद्धत मिल्नेछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि रहनु होला ।
बृश्चिक राशि : तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु – यात्राका निम्ती सामान्य खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर हुनाले आर्यआर्जनमा बिषेश फाईदा रहला । स्वास्थमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दामा अबल रहीनेछ ।
धनु राशि : ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे -प्रिय ब्यक्तिको भेटघाटमा मन प्रशन्न रहनेछ तथा पारिवारीक मनोरञ्जका निम्ती सामान्य खर्च हुनेछ । सामान्य सघंष पश्चात मनग्य आम्दानिका श्रोतहरु फेला पर्नेछ । बिद्यार्थी बर्गका लागी दिन उत्तम रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ ।
मकर राशि : भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि – पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाईको सामना हुन सक्छ ।
कुम्भ राशि : गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द – नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर हुनाले आर्यआर्जनमा बिषेश फाईदा रहला । पराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले सामान्य यात्रा निम्त्याउन सक्नेछ ।
मिन राशि : दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ । सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ ।सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ ।
Prevबलेको डब;ल रोल र बलेकै लगानीमा जुम्लिया दिदि बहिनिको बेजोड अभिनय (भिडियो सहित)
Nextनेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस आज यस्तो छ बिनिमय दर ….
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (115366)
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (66835)
“अनिशालाई भेट्न मन छ हो बा,बु” भनेर सोध्दा कन्चनको यस्तो जवाफ हेर्नुस् (भिडियो सहित) (43081)
मैले दिन नस;केका सबै खु:शि तिमीलाई मिलोस भन्दै छुट्टिए श्रीमान-श्रीमती (भिडियो सहित) (35115)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (34453)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (30944)
लाहुरे राहुल र स्मिताको बारेमा शिशिर भण्डारीले रु; दै यस्तो भने । शिशिरको मनैछुने स,न्देशले सबैलाई रुवा;यो (भिडियो हेर्नुस) (24492)
७० बर्षका श्रीमान २० बर्षीय श्रीमतीको जोडी टिक-टकमा यसरी रम्दै सिरियलमा खेल्न अफर(भिडियो सहित) (23529)
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित) (22732)
झुʼ क्किएर पनि खाʼनुहुँदैन ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले यस्ता खाʼनेकुरा, नत्र ज्याʼनै जान सक्छ । (21557)
गायिका अन्जु पन्त र थिर वैवाहिक जीवनमा बाँधिए ! हेर्नुहोस भिडियो
आज बढ्यो सुनको मुल्य, हेर्नुहोस तोलाको यसरी कारोवार हुदै..